သင်တို့မသိသေးတဲ့ ရေ (လုံးဝ) မသောက်သင့်ဆုံး အချိန် …! – Alinyaung
သင်တို့မသိသေးတဲ့ ရေ (လုံးဝ) မသောက်သင့်ဆုံး အချိန် …!
March 14, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM Health 0
ထမင်း အသက် ခုနစ်ရက်၊ ရေ အသက် တစ်မနက် ဆိုတဲ့ ရှေးစကား ရှိပါတယ်။
လူသားတွေ အတွက် ရေက ဘာ့ကြောင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ် ပါသလဲ……
(၁) ဦးနှောက် ရဲ့ ၇၅ရာခိုင်နှုန်း ကို ရေဓာတ် နဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက် ထားပါတယ်။
(၂) ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူချိန် ကို မျှတစေပါတယ်။
(၃) သွေး ရဲ့ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်း က အရည် ဓာတ်များဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ကြွက်သားကို ရေဓာတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
(၅) အရိုး ထဲမှာ ရေဓာတ် ၂၂ရာခိုင်နှုန်း ပါရှိပါတယ်။
(၆) ခန္ဓာကိုယ် ထဲသို့ရောက်ရှိ လာတဲ့ အစားအစာတွေ ကို ခွန်အား အဖြစ်ပြောင်းလဲပေး ပါတယ်။
(၇) ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ ပိုလျှံပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ အ ရည်တွေ နဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ ကို ဆီး၊ ဝမ်း၊ သွေး ၊ ချွေး၊ ချွဲ သလိပ် အဖြစ် စွန့်ထုတ်ပေး ပါတယ်။
(၈) ခန္ဓာကိုယ် အ တွက် အာဟာရဖြစ်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
(၉) အ သက်ရှူခြင်း ကို အထောက် အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။
(၁ဝ) အရိုး အဆက် များ ပွန်းတိုက် စားခြင်း မှ သက်သာစေပါတယ်။
(၁၁) ခန္ဓာကိုယ် တွင်း ဆဲလ်များ ကို အောက်ဆီဂျင် မပြတ် လပ်စေတော့ပါဘူး။
(၁၃) ခေါင်းကိုက် သက်သာစေပါတယ်။
(၁၄) ပင်ပန်းနွမ်းနယ် မှုကိုပြေပျောက်စေ ကာ စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေပါ တယ်။
(၁၅) ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေအလား အလာ ကို လျော့ပါး သွားစေပါတယ်။
(၁၆) အမောအပန်း ခံနိုင်ပြီး လေ့ကျင့် ခန်း ကြာကြာလုပ်နိုင်လာ ပါတယ်။
(၁၇) အသား အရေကောင်း ပြီး အရွယ်တင်နုပျိုစေပါတယ်။
(၁၈) ဝက်ရူးပြန်၊ တီဘီ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ကျောက်ကပ်၊ လည်ချောင်းနာ၊ နှာခေါင်း၊ ဝမ်းချုပ်၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ တို့ကို သက်သာစေ ပါတယ်။
(၁၉) အမြင် အာရုံ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဘယ်အချိန်များ က ရေသောက်ရန် အသင့်တော်ဆုံး အချိန်များဖြစ်ပါသလဲ ရေခဲရေ နဲ့ ရေနွေးတွေကို မဆိုလိုပါ။ (ရိုးရိုးသောက် ရေသန့် ကိုသာ သောက်ပါ)
(၁) တစ်ညတာလုံး ငြိမ်သက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကလီစာ များကို ပြန်လည် တက်ြ<ွကလာအောင် လှုံ့ဆော် ပေးဖို့ နံနက် အိပ်ရာထ တာနဲ့ သောက်ရေနှစ်ခွက်သောက် ပေးရပါမယ်။
(၂) အစာကြေညက်စေဖို့ ထမင်း မစားခင် နာ ရီဝက်ကြိုတင် ၍ ရေတစ်ခွက် သောက်ပေးရပါမယ်။
(၃) သွေးခုန်နှုန်း မှန်စေရန် နဲ့ သွေးကျစေဖို့ ရေ မချိုးခင် ရေတစ် ခွက် သောက်ပေးရပါမယ်။
(၄) လေဖြတ်/နှလုံးရောဂါ တွေ မဖြစ်အောင် ညမ အိပ်ခင် ရေတစ်ခွက် သောက်ပေးရပါ မယ်။
(၅) အိပ်ပျော်နေ စဉ် ခြေသလုံး ကြွက်သားတွေ ကြွက်တက်ခြင်း မဖြစ်ရလေအောင် ညဘက် တစ်ရေးနိုး တဲ့ အခါ ရေ ထသောက် ပေးပါ။
ရေ (လုံးဝ) မသောက် သင့်ဆုံး အချိန်က ဘယ် အချိန် ဖြစ်ပါသလဲ.. အမေရိကန် ကျန်းမာရေး သုတေသီတွေ ရဲ့စစ်တမ်းများ အ ရ ကမ္ဘာပေါ် မှာ တရုတ် နဲ့ ဂျပန် လူ မျိုးတွေ မှာ အူ ကင်ဆာရောဂါ ဖိစီးခံရမှု အနည်းဆုံးဖြစ်ကြပါတယ် တဲ့။
အကြောင်းရင်း ကတော့ ထို လူမျိုးတွေက ထမင်းစားနေစဉ် မှာ ရေခဲရေ / ရိုးရိုးရေ အေး မသောက်ကြ ဘဲ ရေနွေးဖြူ (သို့မဟုတ်) လက်ဖက် ရည်ကြမ်း ပူပူ ကိုသာ သောက်သုံးလေ့ ရှိလို့ပါပဲ။
အထူးသ ဖြင့် ထမင်းစားရင်း ရေခဲရေအေးအေးသောက်တဲ့ အခါ ဟင်းလျာ ထဲမှာပါရှိတဲ့ အဆီအနှစ်တွေက (ဥပမာ ပြရရင် ရေခဲရေ နဲ့တွေ့တဲ့ အခါ ဟင်း အဆီတွေက ) အစာအိမ် နဲ့ အူ လမ်းကြောင်း မှာ ရွှံ့စေး အနည် အနှစ်များ သဖွယ် ခဲပျစ် သွားတတ်ကြပြီး အစာကောင်းစွာ မချက်ပြုတ်နိုင်တော့ ဘဲ အူ ကင်ဆာဖြစ် လာစေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ထမင်းဟင်း ပူပူ စားရင်း ရေခဲရေအေးအေးသောက်လိုက် တဲ့ အခါ များ မှာလည်း အပူ အအေး တစ်ပြိုင်နက် တည်း တွေ့လိုက်တာ ကြောင့် အစာအိမ် ကို ကသိကအောက်ဖြစ် စေပါတယ်။
အပူအအေး တန်ပြန်သက်ရောက် မှုက အစာအိမ် အက်စစ်ထွက်ရှိမှု ကို ကမောက် ကမဖြစ်လာပြီး ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့်စေပါ တော့တယ်။
ဒါကြောင့် ထမင်းစားနေစဉ် မှာ ရေခဲရေ/သောက်ရေအေး တို့ဖြင့် မျှောမချဘဲ ဟင်းချို ပူပူ (သို့မဟုတ်)ရေနွေးဖြူ (သို့မဟုတ်)ရေနွေးကြမ်း တို့ဖြင့်သာ ထမင်းလုပ် မနင်အောင် မျှောချကြပါရန် နဲ့ ထမင်း စားပြီး အနည်းဆုံး နာရီဝက်ကျော် ကြာမှသာ သောက်ရေအေးသောက်ကြပါရန် အမေရိကန် ရှိ ကျန်းမာရေး သုတေသီများက Daily Health Tips (ခေါ်) အင်တာနက်သတင်း မှာ အကြံပေးဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
သို့ပါ၍ ဤ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် မိမိကိုယ် ကိုဆင်ခြင် ကြပြီး မိသားစု ၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ များအားလုံး ကိုလည်း ကျန်းမာရေး အသိပေးမျှဝေပေးခြင်း ဖြင့် လူ ၁ဝယောက် မှာ အနည်းဆုံး တစ်ယောက် ကို အသက် ကင်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်လိုက်ရ ပါတယ်။
မှီငြမ်း :: …Daily Health
ထမငျး အသကျ ခုနဈရကျ၊ ရေ အသကျ တဈမနကျ ဆိုတဲ့ ရှေးစကား ရှိပါတယျ။
လူသားတှေ အတှကျ ရကေ ဘာ့ကွောငျ့ မရှိမဖွဈ လိုအပျ ပါသလဲ……
(၁) ဦးနှောကျ ရဲ့ ၇၅ရာခိုငျနှုနျး ကို ရဓောတျ နဲ့ ဖှဲ့စညျး တညျဆောကျ ထားပါတယျ။
(၂) ခန်ဓာကိုယျတှငျး အပူခြိနျ ကို မြှတစပေါတယျ။
(၃) သှေး ရဲ့ ၈၃ ရာခိုငျနှုနျး က အရညျ ဓာတျမြားဖွဈပါတယျ။
(၄) ကွှကျသားကို ရဓောတျ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျး နဲ့ ပွုလုပျထားပါတယျ။
(၅) အရိုး ထဲမှာ ရဓောတျ ၂၂ရာခိုငျနှုနျး ပါရှိပါတယျ။
(၆) ခန်ဓာကိုယျ ထဲသို့ရောကျရှိ လာတဲ့ အစားအစာတှေ ကို ခှနျအား အဖွဈပွောငျးလဲပေး ပါတယျ။
(၇) ခန်ဓာကိုယျ ထဲမှာ ပိုလြှံပွီး မလိုလားအပျတဲ့ အ ရညျတှေ နဲ့ အဆိပျအတောကျတှေ ကို ဆီး၊ ဝမျး၊ သှေး ၊ ခြှေး၊ ခြှဲ သလိပျ အဖွဈ စှနျ့ထုတျပေး ပါတယျ။
(၈) ခန်ဓာကိုယျ အ တှကျ အာဟာရဖွဈအောငျ ကူညီပေးပါတယျ။
(၉) အ သကျရှူခွငျး ကို အထောကျ အပံ့ဖွဈစပေါတယျ။
(၁ဝ) အရိုး အဆကျ မြား ပှနျးတိုကျ စားခွငျး မှ သကျသာစပေါတယျ။
(၁၁) ခန်ဓာကိုယျ တှငျး ဆဲလျမြား ကို အောကျဆီဂငျြ မပွတျ လပျစတေော့ပါဘူး။
(၁၃) ခေါငျးကိုကျ သကျသာစပေါတယျ။
(၁၄) ပငျပနျးနှမျးနယျ မှုကိုပွပြေောကျစေ ကာ စိတျကွညျလငျ လနျးဆနျးစပေါ တယျ။
(၁၅) ကငျဆာဖွဈနိုငျခွအေလား အလာ ကို လြော့ပါး သှားစပေါတယျ။
(၁၆) အမောအပနျး ခံနိုငျပွီး လကေ့ငျြ့ ခနျး ကွာကွာလုပျနိုငျလာ ပါတယျ။
(၁၇) အသား အရကေောငျး ပွီး အရှယျတငျနုပြိုစပေါတယျ။
(၁၈) ဝကျရူးပွနျ၊ တီဘီ၊ ပနျးနာရငျကပျြ၊ ကြောကျကပျ၊ လညျခြောငျးနာ၊ နှာခေါငျး၊ ဝမျးခြုပျ၊ လိပျခေါငျးရောဂါ တို့ကို သကျသာစေ ပါတယျ။
(၁၉) အမွငျ အာရုံ တိုးတကျကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ဘယျအခြိနျမြား က ရသေောကျရနျ အသငျ့တျောဆုံး အခြိနျမြားဖွဈပါသလဲ ရခေဲရေ နဲ့ ရနှေေးတှကေို မဆိုလိုပါ။ (ရိုးရိုးသောကျ ရသေနျ့ ကိုသာ သောကျပါ)
(၁) တဈညတာလုံး ငွိမျသကျနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျး ကလီစာ မြားကို ပွနျလညျ တကျွ<ှကလာအောငျ လှုံ့ဆျော ပေးဖို့ နံနကျ အိပျရာထ တာနဲ့ သောကျရနှေဈခှကျသောကျ ပေးရပါမယျ။
(၂) အစာကွညေကျစဖေို့ ထမငျး မစားခငျ နာ ရီဝကျကွိုတငျ ၍ ရတေဈခှကျ သောကျပေးရပါမယျ။
(၃) သှေးခုနျနှုနျး မှနျစရေနျ နဲ့ သှေးကစြဖေို့ ရေ မခြိုးခငျ ရတေဈ ခှကျ သောကျပေးရပါမယျ။
(၄) လဖွေတျ/နှလုံးရောဂါ တှေ မဖွဈအောငျ ညမ အိပျခငျ ရတေဈခှကျ သောကျပေးရပါ မယျ။
(၅) အိပျပြျောနေ စဉျ ခွသေလုံး ကွှကျသားတှေ ကွှကျတကျခွငျး မဖွဈရလအေောငျ ညဘကျ တဈရေးနိုး တဲ့ အခါ ရေ ထသောကျ ပေးပါ။
ရေ (လုံးဝ) မသောကျ သငျ့ဆုံး အခြိနျက ဘယျ အခြိနျ ဖွဈပါသလဲ.. အမရေိကနျ ကနျြးမာရေး သုတသေီတှေ ရဲ့စဈတမျးမြား အ ရ ကမ်ဘာပျေါ မှာ တရုတျ နဲ့ ဂပြနျ လူ မြိုးတှေ မှာ အူ ကငျဆာရောဂါ ဖိစီးခံရမှု အနညျးဆုံးဖွဈကွပါတယျ တဲ့။
အကွောငျးရငျး ကတော့ ထို လူမြိုးတှကေ ထမငျးစားနစေဉျ မှာ ရခေဲရေ / ရိုးရိုးရေ အေး မသောကျကွ ဘဲ ရနှေေးဖွူ (သို့မဟုတျ) လကျဖကျ ရညျကွမျး ပူပူ ကိုသာ သောကျသုံးလေ့ ရှိလို့ပါပဲ။
အထူးသ ဖွငျ့ ထမငျးစားရငျး ရခေဲရအေေးအေးသောကျတဲ့ အခါ ဟငျးလြာ ထဲမှာပါရှိတဲ့ အဆီအနှဈတှကေ (ဥပမာ ပွရရငျ ရခေဲရေ နဲ့တှတေဲ့ အခါ ဟငျး အဆီတှကေ ) အစာအိမျ နဲ့ အူ လမျးကွောငျး မှာ ရှံ့စေး အနညျ အနှဈမြား သဖှယျ ခဲပဈြ သှားတတျကွပွီး အစာကောငျးစှာ မခကျြပွုတျနိုငျတော့ ဘဲ အူ ကငျဆာဖွဈ လာစပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ထမငျးဟငျး ပူပူ စားရငျး ရခေဲရအေေးအေးသောကျလိုကျ တဲ့ အခါ မြား မှာလညျး အပူ အအေး တဈပွိုငျနကျ တညျး တှလေို့ကျတာ ကွောငျ့ အစာအိမျ ကို ကသိကအောကျဖွဈ စပေါတယျ။
အပူအအေး တနျပွနျသကျရောကျ မှုက အစာအိမျ အကျစဈထှကျရှိမှု ကို ကမောကျ ကမဖွဈလာပွီး ဗိုကျနာ ဗိုကျအောငျ့စပေါ တော့တယျ။
ဒါကွောငျ့ ထမငျးစားနစေဉျ မှာ ရခေဲရေ/သောကျရအေေး တို့ဖွငျ့ မြှောမခဘြဲ ဟငျးခြို ပူပူ (သို့မဟုတျ)ရနှေေးဖွူ (သို့မဟုတျ)ရနှေေးကွမျး တို့ဖွငျ့သာ ထမငျးလုပျ မနငျအောငျ မြှောခကြွပါရနျ နဲ့ ထမငျး စားပွီး အနညျးဆုံး နာရီဝကျကြျော ကွာမှသာ သောကျရအေေးသောကျကွပါရနျ အမရေိကနျ ရှိ ကနျြးမာရေး သုတသေီမြားက Daily Health Tips (ချေါ) အငျတာနကျသတငျး မှာ အကွံပေးဖျောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
သို့ပါ၍ ဤ ကနျြးမာရေးဆောငျးပါးကို ဖတျရှုပွီးနောကျ မိမိကိုယျ ကိုဆငျခွငျ ကွပွီး မိသားစု ၊ ဆှမြေိုး၊ မိတျဆှေ မြားအားလုံး ကိုလညျး ကနျြးမာရေး အသိပေးမြှဝပေေးခွငျး ဖွငျ့ လူ ၁ဝယောကျ မှာ အနညျးဆုံး တဈယောကျ ကို အသကျ ကငျတငျနိုငျမှာဖွဈပါကွောငျး အသိပေးနှိုးဆျောလိုကျရ ပါတယျ။
မှီငွမျး :: …Daily Health
လားရှိုး မောက်တောင်းရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း မီးလောင်၊ ဆင်းတုတော်တဆူသာ ကျန်ရှိ
အင်းတော်မြို့နယ်ရှိ ဗုံလုပ်ငန်း မိသားစု တစ်စုမှ ငွေကျပ်သိန်း ၅၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိ စည်တော်ကြီးတစ်လုံးကို ထုလုပ်နေ၊ ပြီးစီးပါက ဘုရားသို့လှူမည်